तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको नाफामा उल्लेख्य सुधार | गृहपृष्ठ
Home लगानी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको नाफामा उल्लेख्य सुधार
on: December 20, 2018 लगानी
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको नाफामा उल्लेख्य सुधार
पुस ५, काठमाडौं (अस) । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको नाफामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । होटलले गत वर्षको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढी रू. ३ करोड ९० लाख ८६ हजार कर्मचारी बोनस र कर अघिको नाफा आर्जन गरेको हो । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिमा भने रू. १ करोड २९ हजार मात्र थियो ।
यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा होटल संचालनबाट ३३ प्रतिशत बढी रू. २६ करोड ३१ लाख ८८ हजार आम्दानी गरेको छ । गत वर्षभन्दा करीब ४ गुणा बढी संचालनबाट मुनाफा गरेकाले पनि नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिन्छ । गत वर्ष संचालनबाट रू. ९८ लाख २ हजार मुनाफा गरेको होटलले यस वर्ष रू. ३ करोड ९० लाख ८६ हजार गरेको हो ।
हाल रू. १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार चुक्तापूँजी रहेको होटलको जगेडा कोष रकम रू. ४८ करोड २ लाख ९० हजार रहेको छ । चुक्तापूँजीमा गत वर्षको तुलनामा कुनै सुधार नदेखिएपनि जगेडा कोष रकम भने ३ गुणाले बढेको हो । पहिलो त्रैमासमा होटलको प्रतिशेयर आम्दानी २ रूपैया ७ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ३१ रूपैया १ पैसा रहेको छ । होटलले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी होटललाई अझ बढी सुविधासम्पन्न बनाउनका लागि नविकरण कार्यमा जोड दिर्दै आएको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २८ जेठ २०७६)
तारागाउँ रिजेन्सीका लगानीकर्ताका लागि १२.६३१ प्रतिशत नगद लाभांश
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको साधारण सभा शुक्रवार, के के छन् प्रस्ताव ?
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको नाफा ३५ करोड ६५ लाख, गत आवभन्दा कति प्रतिशतले वृद्धि ?